गढिमाई मेलाको सम्झना – MySansar
हरेक पाँच वर्षमा लाग्ने बाराको गढिमाई मेला यो वर्ष जारी छ। मेलाको मुख्य दिन मंगलबार राँगाको बलि दिइयो भने बुधबार हाँस, परेवा आदिको दिइन्छ। पाँच वर्ष अघि हामी यो मेलाको रिपोर्टिङका लागि पुगेका थियौँ। त्यतिबेला लेखेको ब्लग-
त्यतिबेलाको भिडियो रिपोर्ट-
त्यो भन्दा अगाडि नेफेजले तयार पारेको यो पुरानो रिपोर्ट हेर्नुस्-
गढिमाईमा बलि : देउताले कहाँ कहिले मलाई खुसी गर्न बलि चढाऊ भनेका छन् हँ? पिताम्बर पाण्डेको ब्लग
गढिमाई बलि समर्थकले हेर्नै पर्ने पाँच फोटो, हेर्नुस् र ‘गर्व’ गर्दै भन्नुस् ‘ठीकै हो’
गढिमाईमा रक्तपात होइन, गौदान गर्ने चलन बसाउन सके कसो होला ? साक्षात सुशीलको ब्लग
1 thought on “गढिमाई मेलाको सम्झना”
यो मेलामा गर्नुपर्ने मुख्य सुधार भनेको बलि दिइएको पशुहरुको सहि व्यवस्थापन हो। मासुलाई गढ़िमाईको प्रसाद भनेर बरु बेचे पनि हुने।